Eto no ahafahanao mametraka fanehoan-kevitra momba ity tranokala ity, sambo, motors, fanjonoana, ary lohahevitra hafa, na mba lazao tsotra fotsiny ary alaivo aminay ny toerana misy anareo. Azafady, tsy misy politika, vazivazy, na zavatra tsy mety amin'ity tranonkala ity. Ianao dia tsy maintsy Hiditra raha tianao ny hiala hevitra.
napetraky carson.orm ny Thu, 01 / 31 / 2019 - 18: 02
Famoronana olana (azafady azafady)
Noho izany, nahazo ny Lightwin 1952 aho izay efa niezaka ny hanomboka. Nanova ny solika aho, nanadio tobin-tsolika, nodioviko ny fonosana, nopotehina ny entana, dia nesoriny ny vilia ary niparitaka ilay kibay avy tao anaty kafe manontolo niaraka tamin'ny mpanadio karb, ary nalain'izy ireo ny fivoriambe ary nodioviny ny vala ary ny valan-drano. Noraisiko daholo izy rehetra ary efa nipoitra ny solika. Manosika azy io miaraka amin'ny biriky ary ny zavatra rehetra dia ny mipoitra indray mandeha indray mandeha fa tsy manomboka fotsiny izany. Niparitaka aho fa tsy olana elektrika izany. Tsy vitako ny manomboka izany. Ny hoe 15 ihany no tsy manana ny traikefa indrindra raha toa ka afaka manondro ahy amin'ny tokony ho izy ny rehetra dia ho feno fankasitrahana aho. Misaotra
napetraky carson.orm ny Thu, 01 / 31 / 2019 - 18: 16
Namaly ny Famoronana olana (azafady azafady) by carson.orm
Manana fanakanana tsara ihany koa izy io ...
Manana tsindrimpeo tsara ihany koa izy ary nandraraka seafoam sasantsasany teo amin'ny loha-bolamena sy ny fihenany amin'izao fotoana izao
napetraky carson.orm ny Thu, 01 / 31 / 2019 - 19: 20
Namaly ny Manana fanakanana tsara ihany koa izy io ... by carson.orm
Niezaka ny hanomboka ...
Niezaka fotsiny ny hanomboka ny seakingam mangatsiatsiaka mandritra ny ora iray, pops ary mifoka sigara. Tsy manomboka
napetraky rd58 ny Thu, 02 / 07 / 2019 - 13: 22
Namaly ny Niezaka ny hanomboka ... by carson.orm
Jereo ambany ambany
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 02 / 08 / 2019 - 00: 24
Raha marina ny zava-drehetra, dia mila mihazakazaka izy!
Midika izany fa amin'ny fomba mahasoa. Tsy maintsy misy ny zava-drehetra ary tsy misy famerenana. Mbola mianatra izany fahamarinana izany aho.
Antenaina fa hamaky amin'ny alalan'ny famandrihako HP 3.5 Tune-Up-fitsarana. Ny 5.5 ihany koa dia fiarovan-tena mitovy, fa ny roa kosa tokony vakiana mba hahazoany tombony feno.
Lazao ahy ny kodiarana, ny teboka, ny condensers, ary ny plug. Sarobidy ny fandaniana amin'ny fisoloana ireo ampahany ireo satria mandeha tsara izy ireo noho ny taonany.
Zava-dehibe koa ny fandaharam-potoana. Tsy maintsy marina izany. Aza omena. Ho tonga any ianao.
napetraky keith_bores ny Thu, 03 / 28 / 2019 - 09: 31
Na iza na iza dia manana laharana ampahany amin'ny tombo-kase ambany ho an'ny 55 QD-16 dia toa tsy mahita ny kitapo marina na aiza na aiza.
napetraky buzzsaw tamin'ny Fri, 04 / 12 / 2019 - 09: 38
Namaly ny Tariby ambany by keith_bores
Manana 1955 QD 16 koa aho ary avy amin'ny zavatra novakiako, ny tombo-kase ambany dia mitovy amin'ny taona 18 hp raha ny fiovan'ny singa ambany ao 1958 eo amin'ny 10 hp dia ny 18 hp dia tokony hanana tsepera mitovy amin'ny 10 taloha s.
napetraky rd58 ny Thu, 02 / 07 / 2019 - 13: 20
Andramo ny fametahana ny tsora-tsofa mipetaka mankany ambony. Raha toa ka miverina izy ireo ary ny zavatra rehetra dia mety ho azonao ny pao, bang, na ny tifitra asehonao. Nanana an'io olana io ihany aho tamin'izaho vaovao mba hiasa amin'ny boaty 2cyl.
Izaho ihany koa 15 saingy efa tany am-baravarankely nandritra ny fotoana fohy. Izany no zavatra niainako ary misy olona marobe any, miaraka amin'ny hafa, fa ny vola 2 fotsiny
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 02 / 08 / 2019 - 00: 27
Namaly ny Tapaka fanenonan-tseranana by rd58
napetraky AudreyTSheehan amin'ny Mon, 02 / 26 / 2019 - 11: 54
napetraky oldarmydog ny Thu, 03 / 14 / 2019 - 23: 18
inona no mety ho fanesorana ny 1977 Johnson 25hp modely tsy 25R77H, ary misy fomba tsara sy fomba diso hamakiana an'ity laharana ity amin'ny tsingerina toy ny hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahako manidina ny cylinder tsirairay?
napetraky oldarmydog tamin'ny Fri, 03 / 15 / 2019 - 17: 33
Manana modely 1977 Johnson 25 hp aho # 25R77H ary mila mahafantatra aho hoe inona ny famadihana tsara isaky ny cylinder tsirairay. Ary koa raha misy afaka milaza amiko hoe inona ankoatry ny fanombohana dia mila mila miova avy amin'ny manomboka manomboka ny elec dia manomboka ny fanovàna ny ampahany mba hanampy amin'ny fanaovana izany. Misaotra ny fanampiana azoko azoko. Miezaka mamerina ny sambo ho an'ny fiangonanay aho amin'ny fampiasana ny tobim-pialan-tsasatry ny ankizy, mila trano vaovao izy io, Ny sambo dia 1970 Starcraft 14 'sambo mpandroba lalina. Hatramin'izao, tokony tsara ny miverina amin'ny farany amin'ny faran'ny herinandro manaraka ary avy eo manomboka eo amin'ny môtô. Misaotra indray indray ny vaovao rehetra.
napetraky keith_bores tamin'ny Wed, 03 / 27 / 2019 - 23: 22
1955 QD-16 Fanampiana !!!
Miarahaba, nividy an'io johnson seahorse 10hps vao haingana aho satria nahaliana ahy sy niezahako hahitana ny kitapom-bokatra na ny laharana ampiharina amin'ny tombo-kase eo amin'ny vatako kely ambany. Nividy tombo-kase tety anaty aterineto aho ary diso foana izy ireo. Misy tombo-kase roa misy nomeraon-tombo sy spaghetti sy ando 2 o (iray ho an'ny fihodinana ary ny iray ho an'ny fantsom-bokatra). Ary misy ampahany kely ho an'ny fanindroa varahina izay mihazona ny angam-paingo? Olona iray no tsy maintsy mahalala sy afaka manondro ahy amin'ny làlana marina. Ny fanampiana rehetra dia ankasitrahana. Ary aza misalasala mandefa mailaka amiko bores.keith@yahoo.com
Ps I love what this site does. Ny ampahany betsaka dia mety ho fanampiny.
napetraky johnhimm amin'ny Mon, 04 / 08 / 2019 - 11: 51
Nirodana ny fiara
Manana Evinrude Fisherman 5.5 aho, modely 5523. Nanamboatra ilay carburetore talohan'ny vanim-potoana farany. Nifindra tsara nandritra ny fahavaratra aho, saingy nanomboka ny olana dia nieritreritra aho fa nanapa-kevitra. Rehefa mikisaka mankany amin'ny tranokely dia manomboka miondrika sy mijanona ny motera, raha tsy hoe halefako ny choke ampahany. Idles OK, saingy ilaozany ny shock mihidy ho an'ny hazakazaka ambony kokoa. Soso-kevitra?
napetraky bettyfoster tamin'ny Sat, 05 / 18 / 2019 - 21: 29
Nanontany tena aho raha toa ka misy ny boky (1952 - 1953) amin'ny endrika printy tahaka ny PDF?
Misy fahasamihafana maro eo amin'ny 1955 sy ity boky ity.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 05 / 22 / 2019 - 14: 23
Namaly ny Evinrude Lightwin (1955) by bettyfoster
Nivarotra azy ireo tamin'ny Ebay (Kitiho eto). Hitako tao amin'ny PDF tao amin'ny Facebook izany. Raha mihazakazaka indray aho, dia hametraka rohy eto aho.
napetraky jbanks2655 amin'ny Mon, 05 / 28 / 2019 - 19: 31
Manana ny motera subject aho ary mila vondrona ambany ary ireo tombo-kase rehetra dia ho azonao ireo zavatra ireo. Modely # RDSL - 28B.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 06 / 04 / 2019 - 17: 28
Namaly ny 1966 Johnson 40hp by jbanks2655
Ity ny lisitry ny ampahany amin'ny ny motera anisan'izany ny 18-2686 Seal Kitapo ambany.
Amin'izao fotoana izao dia mivarotra ny sombin-tombo-kase marobe amin'ny Amazon sy eBay izahay. Na dia manana izany aza ianao, tsara ny fotoana hanamarinana ilay fitaka.
Tsara vintana amin'ny tetikasanao, ary azafady mba avelao izahay hampakatra. Tianay ny hahita sary vitsivitsy!
napetraky ted6 amin'ny Mon, 06 / 03 / 2019 - 11: 23
Johnson 4B69B cylinder roa-kilaometatra
mitady fanampiana azafady. Manàna etsy ambony ary mila bobongolo / volavola fanampiny ho azy io.
Misy mahalala izay azoko alaina na azoko ny isa ho azy ireo.
Ao UK mifototra
napetraky ttravis amin'ny Mon, 06 / 04 / 2019 - 17: 19
Namaly ny Johnson 4B69B cylinder roa-kilaometatra by ted6
Hello and welcome! Ny Johnson 4B69B dia ny antsika any Etazonia satria modely 4R69, na 1969 4-HP. Moto kely kely. Na izany na tsy izany, eto dia misy rohy iray hanampy anao hahita ny faritra rehetra, anisan'izany ny coils. Ny ampahany rehetra ilainao dia azonao atao any amin'ny mpivarotra an-dranomasina, na ampiasao ny rohy amazoniko sy eBay.
Johnson 4B69B 4R69 (Tsindrio eto)
Tsy hitako ny fahasamihafana eo amin'ny dikan-teny amerikana sy uk. Raha ny momba ny fametahana sy ny fiompiana, dia io rafitra io ihany no ampiasaina eo amin'ny motera Evinrude / Johnson rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Azonao atao ny mijery ny tetikasa HP 3 HP sy 5.5 HP izay ahafahako manamboatra ny fiaramanidina izay mitovy amin'ny môteranao.
Ny zavatra hafa momba ny môtera sy ny tetikasako dia manakaiky ny maha-mitovy azy ireo ary azo jerena ao amin'ny menus PROJECTS etsy ambony.
Tsara vintana ary azafady mba avelao izahay hampidirina amin'ny tetikasa.
napetraky dtkelly tamin'ny Wed, 07 / 24 / 2019 - 08: 35
Ny olana manomboka ny 1980 Johnson 70 hp. Battery vaovao ary fanombohana vaovao. Nivadika izy ary ankehitriny dia tsy manao izany akory. Tsindrio fotsiny. Ny bateria vaovao dia tsy mamela ny ankamaroany rehefa manaisotra ny batterie aho. Soso-kevitra ??
napetraky ttravis ny Thu, 07 / 25 / 2019 - 19: 54
Namaly ny Manomboka olana by dtkelly
Azo atao ve ny manomboka ...
Mety ho ny solenoid starter?
Ity ny lisitry ny lisitry ny motera
napetraky Lennyleisure3 tamin'ny Wed, 07 / 31 / 2019 - 11: 38
andramo ny mitondra finday ao amin'ny fivarotana ampahany ho an'ny fanadinana entana, avy eo hanamarina
makà fitiliana fatran-taratra amin'ny bateria any amin'ny fivarotana fiara auto eo an-toerana toy ny advance auto na auto zone ka manolo solenoid ho azo antoka fa hahazo solenoid 12vdc.
napetraky Lennyleisure3 tamin'ny Wed, 07 / 31 / 2019 - 11: 33
nanova ny rafi-tsolika 10hp johnson
Misaotra betsaka amin'ny fampahalalana momba ny famadihana ny rafitry ny solika 10hp johnson efa zokinjokiny aho avy amin'ny tsipika vita amin'ny tsipika vita amin'ny tsipika tokana miaraka amin'ny fametrahana paompy solika, fanampiana lehibe.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 07 / 31 / 2019 - 12: 15
Namaly ny nanova ny rafi-tsolika 10hp johnson by Lennyleisure3
Fantatro fa betsaka ny olona eran'izao tontolo izao no hankasitraka sary sy fanoratana momba azy. Angamba somary efa niasa kely izay misy anao sy ny fomba ampiasanao ilay môtô. Inona no modely amin'ny 10 HP anao? Tsy mila manoratra betsaka, fa tsara ho fanampin'ity tranokala ity ary hankasitrahana azy. Misaotra, Tom.
napetraky ArTam2019 amin'ny Mon, 08 / 12 / 2019 - 03: 51
Evinrude Lightwin 3HP tompona boky sy lisitry ny tompony
Salama, manomboka amin'ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny 3HP Lightwin. Azo atao ve ny misintona ireo lisitry ny tompona boky sy lisitry ny tompona. Raha mankany amin'ny Projects-> Evinrude 3HP Lightwin-> Manual tompon'ny boky (na lisitry ny ampahany) dia tsy misy rohy download ..
napetraky hal5778 tamin'ny Sat, 08 / 17 / 2019 - 19: 56
Salama manana manana 1956 Johnson 15hp aho ary nanontany tena raha misy afaka hanome ny mombamomba ny kitapo fanamboarana karbera marina. Mikasa ny hanova ny vina sy ny rano paompy koa aho raha afaka miditra amin'ny lalana tokony hividianana ireo entana ireo dia toy izany koa ny moteur-ko ary nitazona ny 30yrs aho ary HANJAKITIA miverina aho, isaky ny alàko azy io ho eny ambonin'ny sambo ny farihy. Tsy mekanisiana aho fa hianatra io môtô io aho ka manantena bebe kokoa avy amiko amin'ny ho avy, faly be aho nahita ity fahitana ity !!!!!
Tiako ny hahafantatra ny eritreritrao momba ny fanodinana ny rafi-tsolika tsindry amin'ny rafitra 1 vaovaon'ny vaovao?
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 08 / 18 / 2019 - 00: 05
Namaly ny Carburetor by hal5778
Salama. Ity misy zavatra mitovy ao amin'i Evinrude ity. Mitovy ny ampahany rehetra:
Feo toa anao manana moto tsara rehefa manafatra azy.
napetraky hal5778 tamin'ny Sun, 08 / 18 / 2019 - 09: 05
Namaly ny 1956 Johnson 15 HP by ttravis
Misaotra anao Tom hampahafantariko anao ny fomba andavany. Misy eritreritra ve ny momba ny famadihana ny famatsiana solika maivana amin'ny rafitry ny 1 maoderina?
napetraky hal5778 tamin'ny Sat, 08 / 24 / 2019 - 17: 55
Manana 56 15hp Johnson aho fa nodioviko ny karbika (gasket vaovao, mitsinkafona ary fanjaitra ary seza) nesoriko ny fivorian'ny intake sy ny volotara dia nanadio ny faritra rehetra ary niara-nody tamin'ny entona vaovao, nanatanteraka test-compression ary samy tao amin'ny 95lbs ny cylinders. Ny olana ananako dia tsy hanomboka raha esoriko ny efitrano fihinan'ny rivotra ary manaparitaka solika ao anaty karbônitra dia hanomboka izy ary hijanona mihazakazaka. Nodinihiko ny famatsiana solika ary rehefa mampiasa ny primer ao anaty tanky aho dia mameno ilay vilia fitaratra vera. Azo atao ve ny tsy ny fahazoana ny solika no mivoaka avy ao anaty vilia sivana sy ny fitoeran-drivotra? Ary rehefa nanaisotra ny karatra aho dia tsy noraharahako ny fijerena izay napetraka ny fanitsiana ny solika sy ny avo. Misy teboka fanombohana tokony hampiasaina mikasika ny halavany na ny tokony hametrahana azy ireo sy hanitsiana farany taorian'ny nanombohana motera izay nataoko dia namadika azy ireo tamin'ny fomba rehetra ary avy eo nametaka ny kitapo fanitsiana natao teo amin'ny fametrahana matevina sy oviana manandrana manomboka aho dia manana fanitsiana idle ao amin'ny 6 oclock ary ny avo amin'ny 12 oclock? Manantena aho fa tsy nahazo fampahalalana be dia be aho, saingy mampisaintsaina ahy ny rehetra fa nihevitra aho fa ho ilaina daholo ny zava-drehetra.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 08 / 26 / 2019 - 11: 33
Namaly ny TSY FIDA by hal5778
Tsy misy solika
Mipetraka amin'ity herinandro ity aho ary miezaka ny hamaly amin'ny Internet voafetra. Afaka mamaly tsara aho amin'ny herinandro ho avy. Mino aho fa manomboka miovaova sy avo lenta ny 1.5. Aza atao mifampitohy. Toa milentika mandeha amin'ny alàlan'ny entona ny rivotra. Izany dia mitovy fiantraikany toy ny mololo miaraka amin'ny lavaka farangana. Hifatohy ilay fampidirana ary hisintona tady manomboka hanandrana hisolo vava. Hiverina amin'ny herinandro manaraka aho.
Pejy ankehitriny 3
3 herinandro lasa izay